UMnu Bongane Mzinyane.
Umfundisi Wezenhlalakahle uMnu Bongane Mzinyane wethule ucwaningo oluthi: Access to Justice for Rural Young Offenders in KwaZulu-Natal, South Africa: Best Practices and Innovative Methods by Practitioners when Implementing Diversion, kwi-22nd Biennial International Consortium for Social Development (ICSD) Conference.
Lo mcimbi obuwenziwe ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje ubunesihloko esithi Poverty, Inequality and Social Development Innovations around the World.
Inkulumo kaMzinyane, ebisuselwe ocwaningweni lwakhe, ibalule izinto ezintsha nezinhle ezenziwa emsebenzini ezisetshenziswa ngosonhlalakahle ezindaweni ezisemakhaya KwaZulu-Natali. Iphepha lakhe locwaningo lwenze izincomo ezimqoka zamanye amazwe afana neNingizimu Afrika.
Ucwaningo lwakhe luphinde lwabheka isimo nokuqonda ‘kwabenzi’ bezinhlelo ezigwema ukugquma ejele izephulamthetho ezincane nezinto ezithikameza nalezo ezikhuthaza izinhlelo ezingabophi labo bantu. UMzinyane uthole ukuthi izinselelo zokuhlinzeka izinto ezinjalo ezindaweni ezisemakhaya wububha nokuswela kwentsha egwetshiwe izinto zokufinyelela edolobheni nokushoda ngezinto zokuhamba nezinsiza zezinhlangano zokuthi abadidiyeli bafinyelele ezindaweni ezisemakhaya.
UMzinyane uphakamise ukuthi izixazululo kulezizinkinga ekuhlinzekeni imiphakathi yasemakhaya ngalezi zinhlelo okukhona kuzona ukuthi zisabalalele nasezindaweni ezisemakhaya nezindlela zokukhuthaza imiyalelo yezinkantolo ihambisane nazo.
‘Izikole zendawo zibambisene nomkhakha wezinhlangano ezingenzi nzuzo eMnambithi ukuthi uhlinzeke ngezindawo ezingewona amajele entsheni ephula umthetho. Ukubambisana kuqinisekise ukuthi ongoti okungebona abasemajele bakwazi ukusabalalisela izinsiza emakhaya ngoba behlinzekwe ngezindawo yizikole,’ kusho uMzinyane.
Uveze ukuthi osonhlalakahle ‘abanaso isandla esiqinile kakhulu’ uma benza ‘umsebenzi kashwele’ kodwa basebenzisa izindlela zokuhlawula ngamacala umuntu awenzile, babheke nezinselelo zabantu abaphule umthetho. ‘Ukubika icala enkantolo yinto yokugcina. Loku kusho ukuthi osonhlalakahle basebenzisa izindlela zokuvuselela isimilo ukufeza izindlela zokungathumeli ejele okusiza ukuthi izingane zingabi nerekhodi lobugebengu.’
UMzinyane uphakamise ukuthi amanye amazwe anezinselelo zenhlalo nezomnotho ezinjengezaseNingizimu Afrika kungabukelwa kuwona ukuthi wona izinto azenza kanjani.
‘Ohulumeni nabaxhasi kudingeka ukuthi batshale ngokuthe xaxa ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo ezisiza izingane zasemakhaya eziphula umthetho,’ kusho uMzinyane. ‘Ukuhlinzeka ngezikhungo ezindaweni ezisemakhaya kufanele kusatshalaliswe ngokwethula imithetho ephoqayo ukuthi kwenziwe. Kufanele kwande ucwaningo olugxila ezindaweni ezisemakhaya ngezinhlelo ezizoholwa ngabantu basemakhaya nongoti abagxile ezindaweni ezisemakhaya.’